Umklamo Wewebhu: Akukona Ngawe | Martech Zone
Idizayini Yewebhu: Akukona Ngawe
NgoLwesine, July 23, 2009 NgoMsombuluko, Juni 2, 2014 UJon Arnold
Ngabe usuzothatha ukwakha kabusha iwebhusayithi enkulu? Kuthiwani ngokwakha kabusha lelo software elixakile kodwa elibucayi? Ngaphambi kokuthi ungene ngaphakathi, khumbula ukuthi umlamuli wokugcina wekhwalithi akuwona, ngabasebenzisi bakho. Nazi izinyathelo ezimbalwa zokuqonda kangcono izidingo zabo nokuziphatha ngaphambi kokusebenzisa noma yimaphi amadola wokuhlela ayigugu:
Yenza ucwaningo lwakho lomsebenzisi
Qala nganoma iyiphi idatha yokulinganisa, efana analytics, osuvele kufanele ubone ukuthi abasebenzisi bakho benzani (noma abenzi). Ukuthola imininingwane eyengeziwe, ungahlola umsebenzisi isayithi yamanje noma isoftware ukuze uzibonele mathupha ukuthi yini ejabulisayo nokuthi yini ecasula abasebenzisi bakho. Khuluma nozakwenu kwezentengiso noma kwezamakhasimende ukuze ufunde izindaba zamanje neziphikelelayo zomsebenzisi. Noma ngabe le datha yocwaningo isivele ikhona embikweni kwenye indawo, zinike isikhathi sokukhuluma. Uzwela ludalwe yingxoxo yangempela nabantu emiseleni kuzokuhlomisa ngokwemvelo ukwenza izinqumo ezenzelwe umsebenzisi nezentuthuko.
Empeleni, kwenze lokho ama-prototypes (ubuningi)? akekho owenza i-prototype ephelele ekuzameni kokuqala. Kepha lowo ngumbono: ukuhluleka ngokushesha, ngokushibhile, futhi kaningi ngangokunokwenzeka ngokwazi ukuthi i-iteration ngayinye ikusondeza kusixazululo esifanele ukwakhiwa. Impela ungakha ama-prototypes asebenzayo nge-HTML noma i-Flash, kepha i-Acrobat, Powerpoint, ngisho nephepha nepensela kusengamathuluzi amahle kakhulu okwenza imibono yakho ibe yifomethi ephathekayo. Ngokwenza njalo, ungaxhumana kangcono, uhlolisise, futhi uvivinye imibono yakho. Ukhuluma ngokuhlolwa?
Lapho abanye becabanga ngokuhlolwa kwabasebenzisi, bacabanga amajazi amhlophe amlebhu namabhodi wokunameka. Ngeshwa, abaningi bacabanga nokubambezeleka nezindleko ezingeziwe. Lapho uphoqelelwe ukukhetha phakathi kwalokhu futhi kungekho ukuhlolwa komsebenzisi nhlobo, iningi likhetha kamuva. Ngehlazo! Kumaphrojekthi amancane noma lawo anomnqamulajuqu omubi, thatha indlela ye-guerilla: thola osebenza nabo abayisithupha kuya kwabayishumi, abazali, abashade nabo, omakhelwane (noma ngubani ozimisele ukusiza) futhi ubabheke ngamunye ngamunye njengoba beqedela umsebenzi owodwa noma emibili ebaluleke kakhulu kumodeli wakho. Lokhu ngeke kukunikeze yonke imininingwane yokuqonda noma yefancy enikezwa ukuhlolwa okusemthethweni kokusebenziseka, kepha ukuhlola noma umuntu oyedwa kuphela kungcono ngo-6% kunokuhlola akekho. Imiphumela ingakumangaza noma ikukhungathekise, kepha kungcono ukwazi lezi zinto manje kunangemuva kokuba iphrojekthi yenziwe ngenye indlela.
Kuyiqiniso ukuthi thina bantu bathanda izinto ezicwebezelayo, ezinhle. Kwezobuchwepheshe, izixhumi ezibonakalayo eziklanywe kahle zithathwa njengokulula ukuzisebenzisa kunezingadizayinelwe. Lokhu akusho ukuthi iphrojekthi yakho kufanele ibe umncintiswano wonobuhle, noma kunjalo. Isibonelo, cabanga ukuthi ngabe ukwakheka kwesikrini seGoogle kusebenzise izithombe ezicebile nokucaciswa kokushintsha kwesikrini. Yize lokhu kungakhanga kolunye uhlelo, kungaba wuhlupho oluphelele kusikrini sokusesha. OkweGoogle, nabanye abaningi impela, kakhulu enhle ukwakhiwa kwesikrini imvamisa kulula kakhulu.
Sazi kahle izingcindezi kuphrojekthi entsha ezoshesha fika emsebenzini ukwakha okuthile. Kuyishwa lapho izinyathelo ezinjengokucwaninga komsebenzisi, ukwenza prototyping, nokuhlolwa kwabasebenzisi kuyizinto zokuqala okufanele zenziwe lapho kuqiniswa isabelomali nesikhathi. Okuxakayo ukuthi lokhu kuzovame ukwenzeka londoloza isikhathi nemali ngokuhamba kwesikhathi, futhi ekugcineni kukugcine ekwakhiweni okungazi ngenguqulo ebukeka ingcono kakhulu yalokho okungasebenzi.
Tags: designisipiliyoni somsebenzisiukwakheka kwesikhombimsebenzisi somsebenzisiuxdesign web
UJon Arnold ungumsunguli nomongameli weTuitive, a ukwakheka kwesikhombimsebenzisi somsebenzisi inkampani eyenza izinhlelo zokusebenza zewebhu nezamaselula zisebenziseke kalula (futhi zibukeke kahle!)
Umama Wayo Yonke Imininingwane
I-WordPress: Faka imininingwane yombhali ku-Sidebar
Jul 23, 2009 ngo-9: 41 PM
Jul 23, 2009 ngo-10: 35 PM
Hhayi uDougy! Lokhu okuthunyelwe kubhalwe ngumngani wethu uJon Arnold waseTuitive - i-ejensi emnandi edolobheni egxile ekwakheni imiklamo yewebhu emangalisayo ekhulisa ulwazi lomsebenzisi.
Jul 24, 2009 ngo-2: 54 PM
Lokho akufanele kube nzima kakhulu ukuthi kuguqulwe kube yi-plugin empeleni.
Jul 24, 2009 ngo-3: 16 PM
Usuvele usebenza ngayo, Dave! Ithunyelwe kusuka ku-Verizon Wireless BlackBerry yami
Kusuka ku: Izaziso ze-IntenseDebate